Fanangonana fomba mahafinaritra ho an'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Styles ho an'ny Photoshop dia fomba tsara hanaovana asa haingana nefa tsy hanimba ny kalitao, na dia mazava ho azy fa tsy afaka ampitahaina amin'ny valiny omen'ny endrika 100% vita tanana aza izy ireo.
Na izany na tsy izany, loharanom-pahalalana iriko hananana eo an-tànana foana izy ireo, ka aorian'ny fitsambikinana dia fanangonana mahery setra ny fomba Photoshop maimaim-poana izay heveriko fa tokony ho hitanao.
Ho tsara ho anao izy ireo.
Fitaovana metaly voarindra
Fomba fanoratana an-tsoratra metaly
Fomba fiasa an-tsoratra Jelly miloko
Maizina Layer Style
Style Layer Chrome
Fitaovana an-tsoratra 3D
Fomba fanapoahana hazavana manjelanjelatra
Fomba hazavana mamirapiratra
Fomban'ny Grunge Layer
Fomba fanaovana an-tsoratra fitaratra
Styles Layer sticker
Kitapo Style Style
Kitapo Style Psdtuts
Fomba fanoratana an-tsoratra amin'ny Noely
Styles Buttons Mamiratra
Styles Glass Orb
Madio tsotra izao
Layer Styles ho an'ny famolavolana bokotra
Fomba fiasa mahatalanjona
Fitaovana Polaroid Layer
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fanangonana fomba mahafinaritra ho an'ny Photoshop
Jose David dia hoy izy:
Namana tena tsara ny fanangonana tsara indrindra amin'ny zavatra hitako .. !!!!!!!! Homeko isa arivo ianao fa tsy ao amin'ny TARINGA izahay! jajajajajajajaja tena tsara …… .ny tsara indrindra… fandraisana anjara lehibe
Valiny tamin'i Jose david
Lucrecia battori dia hoy izy:
Tiako!!! Misaotra betsaka!.
Mamaly an'i Lucrecia Battori
Mica dia hoy izy:
Tsara! Misaotra betsaka fa nanampy betsaka ahy io: D
Valio i Mika
Tiako ny Glitter ary tapaka ny rohy!
Valiny tamin'ny Jolay
Zebra Form, tranomboky PHP manokana ho an'ny endrika